WAXA AAD U BAAHAN TAHAY SI AAD U OGAATO MARKA BEERASHADA IYO SII KORDHAYA UBAXYADA, KHABIIRO BANNAANKA U TILMAAMAYA - WARSHAD ORNAMENTAL KORAYA
Lily - Tani waa ubax aad u qurux badan oo ah caleemaha Lily, oo ay ku jiraan geedo daaqsiin ah oo ka soo baxa nalalka.
Lily waxay caan ku tahay noocyo kala duwan, midab jilicsan iyo foom yar oo tufaax ah.
Ma taqaanaa? Lily waa ubax dhul furan. Si ay u muujiyaan dhammaan nimcadiisa iyo quruxdiisa, waxay u baahan tahay in la beero beerta.
Marka laga beerto ubax, dooran goobta degelka
Wixii ubax jilicsan oo gaaban, beerashada iyo daaweynta cayaarta door weyn.
Waxaa lagama maarmaan ah in lagu mashquuliyo falanqaynta ubaxyada waqti go'an oo qeexan, dooro meesha ugu haboon, dhirta si adag sida waafaqsan mid ka mid ah mashaariicda, ka ogow fogaanshaha foornooyinka dhirta iyo waxa ugu fiicnaanta qoto dheer ee muuqaalka ubaxaaga.
Waa muhiim! Dhibaato gaar ah oo waafaqsan xeerarka waxay u baahan tahay noocyo ubaxyo qalafsan.
Si ay ubaxu u si fiican u barbareeyaan oo ay u farxaan indhaha sanado badan, markaad dooranayso goob, waxaad u baahan tahay inaad taxadar ka yeelato:
qadarka iftiinka qoraxda;
Go'aan kama dambeys ah, riix noocyada kala duwan ee ubaxa. Tusaale ahaan, muraayadaha Asia iyo tubular ayaa ku haboon meelaha banaan, laakiin waxay sidoo kale dareemayaan raaxo yar oo hoos ah.
Waxa ugu muhiimsani waa in hooskaasi aanu ka soo dhicin geedaha (hooskoodu aad ayuu u xoog badan yahay, laakiin ciidda waa la qalajiyey meelahaas). Goobtaas oo kale, gabadh isboorti ah, orange, Dahurian, qurux, midab, mid dheer, ubaxyo iyo Hodonton ayaa si fiican u muujin doona.
Iyadoo lid ku ah miiqyada liiska, Japanese, carniola, chic, dvuyardnuyu, callus, qurux badan, qurux badan oo casaan ah ayaa si fiican loo beeray ee hooska qayb ahaan. Maqalkaas waxay jecel yihiin marka qaybta sare qorraxda, qaybta hoose waxay ku jirtaa hooska.
Si loo gaadho sida dheelitirka, dhirta kale, sida cawska, waxaa lagu beeray xiga ee ubaxa, kuwaas oo dabooli doona afkoda iyo siin doonaa qabow.
Qodobbada lagu beero ubaxyada
Su'aal macquul ah ayaa soo baxaya: sida loo abuuro ubaxyada Si aad u bilowdid inaad dhulka ku qodo goobta dhulka iyo ku darista ciidda. Wixii horumarin ka wanaagsan, waxaad u baahan tahay inaad bacrimiso dalka oo leh humus ama compost.
Waa muhiim! Saameynta ah ee ciid iyo bacriminta waa 1: 1 (1 baaldi ee ciid / bacriminta 1 sq. M)
Sidee loo go'aamiyaa qoto dheer ee dhulka
Ka hor inta aan la beeri, qoyan nalalka ubaxa ee manganese xal ilaa nus saac. Ka dib marka nalalka la gaarsiiyo, waxay u baahan yihiin inay isla markiiba fadhiistaan ​​ceelasha horay loo diyaariyey. Qoto dheer ee beerashada waxay ku xiran tahay xajmiga nalka. Haddii guluubku weyn yahay, markaas daloolku waa inuu noqdaa ugu yaraan 20 cm, iyo kuwa yaryar, 10 cm waa ku filan.
Waa muhiim! Falanqaynta dhirta waa in lagu sameeyaa ciidda horay loo daweeyay.
Qorshaha beerashada ubaxa
Beeridda ubaxyada waxay adeegsanayaan nidaamyo dhowr ah:
hal xariiq oo gaaban. Masaafada u dhexeysa nalalka kuxiran waa inay ahaadaan 5-15 cm, iyo inta u dhaxaysa safarka - aan ka yarayn 50 cm;
laba suun oo kabo ah. Masaafada u dhexeysa nalalka - laga bilaabo 15-25 cm, aan ka yarayn 70 cm inta u dhaxaysa saf. Noocyada noocan ah waxay ku habboon tahay noocyada noocyada kala duwan ee ubaxa;
saddexda xarig Masaafada u dhexeysa xariiqyada iyo nalalka waa 15 cm, iyo inta u dhaxeysa saf - 70 cm.
Sida loo koro ubax
Sidaas oo kale ubax - ubax ah ma jecla bedelka, waxaad ubaahan tahay inaad doorato meel ay beerto iyo daryeelba ay kuu fiicnaan doonaan adiga iyo ubaxa.
Haddii aad ubaxday ubaxyada xilliga dayrta, oo aadan ahan beerta khibrad leh, ka dibna su'aasha ah waxa la samayn doono ayaa hubaal ah. Kaliya waa lagama maarmaan in la kala qeybiyo loona faafiyo ubaxyada dhoobo.
Xilliga dayrta, tani waa shaqada ay la leeyihiin. Waxaan ka wada hadli doonaa in muraayada la bedeli karo xilliga guga wax yar ka dib.
Waqtiga saxda ah ee waraabinta
Haddii aad go'aansato inaad korto ubaxyada, waxaad u badan tahay inaadan haysan wax khaas ah oo ku saabsan sida loo daryeelo. Xitaa jawaabta su'aasha ah: "Sidee loo waraabiyaa ubaxyada?" - Ma ogaan kartid.
Guga iyo xagaaga, miiqyada waa in la waraabiyaa hadba sida ugu macquulsan, laakiin qadar yar oo biyo ah. Waxay u egyihiin, sida dhirta qoryaha, waxay ka jajabin karaan qoyaanka xad-dhaafka ah.
Ma taqaanaa? Layla si fudud u dulqaadashada qalajinta yar, sidaas darteed waa ka wanaagsan in ciidda u qalajiyo wax yar ka yar sidii loo buuxiyo sidoo kale.
U ogolaanshaha ciidda qallajinta sidoo kale maaha mid u qalma. Kobcitaanka dhirta ayaa gaabis noqon doonta, asliga ah waxay noqon doonaan faaqidaad, caleemaha way engegi doonaan.
Si looga hortago qalajinta joogtada ah, waxaad ku beeran kartaa geedo-daaqsimeed hooseeya oo u dhexeeya ubax si loo ilaaliyo qoyaanka ka soo baxa uumiga.
Daryeelka saxda ah iyo bedelka wareejinta ubaxyada ayaa door muhiim ah ka ciyaara koritaanka iyo horumarinta ubaxa.
Sida xaqiiqda ah dhamaan caleenka uma dulqaadan karaan wax kasta oo organic, sidaas darteed waa inaad doorataa Bacriminta macdanta kaliya.
In xilliga gu'ga, marka caleemaha bilaabaan si tartiib tartiib ah ka soo caleemaha, waxaad bilaabi kartaa quudinta naarritirka nitrate kelyaha iyo sii wado labadii toddobaad kasta ilaa dhamaadka Juun. Waxaad ku dari kartaa potassium leh magnesia bilaha xagaaga si dhalaalaya ubaxyada.
Qalal-bararka barafka waa in ay la socdaan bacriminta ciidda bacriminta. Raac tilmaamaha ku yaal baakadka si aadan u waxyeeleynin midabada.
Ma taqaanaa? Bacriminta dabiiciga ah waxay horseedaan burburka ubaxyada.
Fareerinta iyo laalaabinta ubaxyada, Talooyin ku saabsan bilowga
Inta badan miiqyada waxay ku koraan hal meel ilaa shan sano. Inta lagu jiro waqtigan, waxay sameeyaan meelo badan oo hawaar ah oo ah nalalka da'doodu kala duwan tahay iyo qiyaasta kala duwan. Beerta ubaxu waxay soo baxaan dhirbaaxo waa inay dhacaan xilliga dayrta, marka nalalka ay noqdaan mid xoog badan kadib xilliga ubaxa.
Habka ugu caansan ee ubaxyada taranta - daaqsinka: nalalka waxaa laga soocaa warshadda ugu weyn iyo beeray biqilka.
In yar oo aan caadi ahayn laakiin aan lahayn hab waxtar leh - dhalmo kala qaybin: at stem yellowing ka gooyay caleemaha caleenta oo ka samaysan guluubka. Miisaankani waxaa loo beeray hal mid oo dhulka ka mid ah waxaana si joogto ah loo waraabiyaa, sababtoo ah nalalka laydhka oo buuxa.
Waxaa jira xeerar dhowr ah oo ku saabsan beeritaanka ubaxyada:
waa caado ah in la soo saaro nalalka. Guluubka laydh ayaa lagu beeray karaa iyadoo loo marayo dhinacyada. Ka dibna baxsiga ayaa la jiidayaa dhinaca, si tartiib ah u baxda nalalka waaweyn. Up ilaa ubaxu wuxuu bilaabi doonaa inuu koro ka dib markii la sameeyo nalalka;
tayada ciidda iyo habka beerto ayaa si weyn u kala duwanaan kara iyadoo ku xiran nooca iyo nooca ubadka, xilliga, tusaale ahaan, transplanting guga ma aha mid la mid ah xilliga dayrta;
Haddii aad ku beerato nooca Oriental ah, ha ku dhaafin nalalka. Marka laga hadlayo miiqyada Asiatic, lime laguma dari karo ciidda. Ha ilaawin inaad dib u soo celiso labadii sanaba hal mar;
Lily ma baqdo caws. Cayayaanka kaliya ee loogu talagalay iyada waa gorgortanka. Si loo soo saaro caleemaha si dhakhso ah, sababtoo ah haddii cawsku koraa, waxay noqon doontaa mid aad u dhib badan in la saaro.
Sida loo doorto nalalka, shuruucda kaydinta alaabta beerto
Mararka qaarkood xitaa macmacaan khibrad leh ayaa ku adkaata in la ogaado da'da iyo tayada guluubka. Si aad u doorato nalalka ubaxa ee wanaagsan, waxaad u baahan tahay inaad fiiro gaar ah u yeelato muuqaalkooda. Guluubka waa in uu ahaado mid caafimaad leh oo isha ku haya, nadiifiya taabashada iyo xor ka ah maqaarka. Xididadu waa inay noolaadaan.
Ma taqaanaa? Ma aha macno in la iibsado nalalka ka yar 3 cm.
Nalalka waa in lagu kaydiyaa meel qabow ilaa beeritaanka. Waxaa lagama maarmaan ah in ay si fiican u kormeeraan, ka saar miisaanka cayayaanka ah ama waxyeello, iyaga ku rid xal daciif ah ee Kansaraan ah, qalaji oo u wareeji bac caag leh dhadday ama peat, kaas oo godad. Baakada waxaa lagu keydiyaa heerkul ah -2 ° C.
Haddii aad ogaato in nalalka bilaabay in ay dhalaan, waxay u baahan yihiin in lagu beeray dheriyo iyo dib u habayn meel leh dhalaalaya.
Haddii aadan haysan waqti aad ku iibsato walxo beerto wakhtigaa loo qoondeeyey tan, waxaa fiican inaad sugto illaa sanadka soo socda. Nalalka wanaagsan waa la burburiyaa meesha ugu horeysa, iyo wax kasta oo ku haray dhammaadka xilli ciyaareedka, ma bixin karaan wax soo saar.